Tichaona Telefonica gore rino pamusoro pe10 euros? | Ehupfumi Zvemari
Tichaona Telefónica gore rino pamusoro pe10 euros?
Kana paine kukosha kuri pakati pekufungidzirwa pachikamu chevashambadziri vadiki nepakati, iri chokwadi Teleco Telefónica. Iyo yekufambiswa kwemagetsi oparesheni ndeimwe yemakambani akanyorwa mune yakasarudzika indekisi yemarudzi equity ine yakanyanya vhoriyamu yezvibvumirano Asi izvo mukati memakore apfuura aona pamwe nekukosheswa kwemasheya ake kwasvika padhuze ne nhanho dziri pa7 euros mugove. Kupesana nenzvimbo dzakasvika kubva kune vakasiyana siyana vezvematongerwo enyika.
Iye zvino imwe yekiyi iyo Telefónica inayo kuratidza kuti kambani yakanyorwa inozogona here kuputsa rusvingo iyo yainayo pa10 euros. Chinhu chaisatombogona kuve nacho kubva kumakotesheni akagadzirwa, kunyanya panguva yemesester yekupedzisira yegore rapfuura. Ikozvino kumwe kwekusahadzika kune varimi vadiki nepakati varimi ndekwekuti vachazokwanisa here kuita kuti nzvimbo dzavo dziwane pundutso mukati megore idzva remusika wemasheya. Kuti uone kana zviri nyore pinda kana kubuda yemabasa emusika wemasheya.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti makore mashoma apfuura mutengo weTelfónica masheya waipfuura 12 kana 13 euros. Mune mamwe mazwi, iko kuderera kwevatengesi kwave kuri kupfuura pachena, ne kuderera mukuita purofiti zvinopfuura 30%. Kusvika padanho rekuti chokwadi ichi chaita kuti vagovani veiyi kambani huru yeIbex 35 vatye kwazvo. Kunyangwe zvese zvichizendamira, pamwero mukuru, pane hunhu hweSpanish equity musika indekisi. Iine tarisiro inovimbisa kwazvo zvichibva pane zvirevo zvakapihwa nevanoongorora zvemari vakasiyana.
1 Telefónica: bhizinesi mhedzisiro
2 Mukutsvaga manhamba maviri
3 Analyst Mazano
4 Mhedzisiro yekambani
5 Kutengeswa kweAntares
6 Kuwedzera tarisiro
Telefónica: bhizinesi mhedzisiro
Chinhu chirikutamba chichitsigira zvido zvenharembozha yenyika uye icho chingave chinokonzeresa cheiye mutsva kumusoro. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti chimwe chezviitiko zvakakosha chave chekuti mhedzisiro yekota yekambani iyi yerunhare yakaratidza pachena kuti mushandi anochengeta mutinhimira wenguva dzose kuderedza chikwereti chako. Iyi ndiyo imwe yenyaya dzinonyanya kunetsa varimi sezvo iri imwe yeutera kweimwe yemakambani akasarudzika eIbex 35. Kunze kweimwe nzira dzehunyanzvi uye kunyangwe izvo zvinogona zvakare kuve kubva pakuona kwakakosha.
Kune rimwe divi, Telefónica yakagara ichida kudzikisira chikwereti chiripo, ichisiya kutengeswa kwemidziyo kumashure. Iyi nhanho yakaratidza kuti chikamu chakanaka chevatengesi chakadzokera kudanga rekambani yakanyorwa. Kunyangwe zvichizodikanwa kuti uone kuti mabudiro ebhizinesi achave sei achakura mukati megore idzva iri richangotanga. Nekuti mamiriro akakura kusagadzikana mumisika yemari uye izvo zvinogona kukuvadza mutengo wemasheya ako. Chinhu chinodikanwa nevashambadzi vadiki nepakati kubva pane idzi chaiyo nguva.
Mukutsvaga manhamba maviri
Chinangwa chikuru chezviito zveTelefonica mumwedzi iri kuuya, uye pamusoro pezvimwe zvinhu, chichava chekutsvaga uye kupfuudza chakakosha chikamu chepfungwa chakamiswa mu 10 euros pachikamu chimwe nechimwe. Chinhu icho parizvino chisina kujeka zvichibva pahunhu husina kujairika uhwo misika yequity iripo padanho repasirese. Iko chikwereti cheiyi kambani chave padhuze nemamirioni makumi mana emamiriyoni euros. Chero zvazvingava, mhedzisiro yebhizinesi yakaratidza kuti yadonha neinenge 43.000% mugore rimwe chete.
Idzi inhau dzakanaka dzekunyorwa kwako mu2019 iwe unogona kuenderera nzvimbo dzekukwira uye pedzisa iyi kosi yemusika wemari neyero yakanaka. Kune rimwe divi, zvakare zvakareruka kwazvo kuyeuka kuti idzi dhata dzepamutemo dzinosimbisa kuti kambani yekufona ichiri munzira yepamusoro. Zvirinani mune izvo zvinoreva kune yepakati nepakati yakareba, ino inguva iyo vashoma nevepakati varimimari vanowanzo enda kunogadzira zvishoma nezvishoma gadziriro yekuchengetedza yakatsiga uye panguva imwechete yakaenzana neicho inomiririra mumisika yemasheya.
Kunyangwe zvingaite sekutanga pakutanga, chokwadi ndechekuti varimi vanofunga kuti migove yekambani yekuterevhizheni iyi ichiri mudenga rekukwira, uko vazhinji vanoongorora zvemari vanofarira kukurudzira kutenga uye kupa mutengo wakanangwa wakakwira kupfuura mutengo wazvino. Nekukosheswa kunosanganisirwa mumatanho ayo anotarisana pakati pe8 ne10 euros mugove. Kunyangwe paine vamwe zvakare vanoimaka pamusoro pemahara aya mukukoshesa kwavo.
Chero nzira, zvinoita kunge pachena kuti izvozvi ino haisi nguva yekuvhara zvinzvimbo kana yakamisikidzwa pamutengo. Kunyangwe iwe uchinge uchine bearish kumhanya mumwedzi iri kuuya kana kunyangwe mavhiki. Zvakaoma kuona Telefónica migove pamutengo wakaderera pane manomwe euros. Semhedzisiro yechiitiko ichi, kudyara kunoitwa mukati nepakati uye kwenguva refu hakuzopa matambudziko akawandisa kune vashoma nevepakati varimi, avo vanozove nyore zvishoma kuita mari yavo kuchengetedza kubva panguva dzino chaidzo. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Mhedzisiro yekota iyo Telefónica yakapa padanho zvishoma kana shoma yafadza misika yemari. Nekuti mukuita, mabhenefiti akawedzera kana achienzaniswa negore rapfuura. Kunyangwe iyo yakanyanya kukosha dhata nekwekuti mapfuti anogona kuenda mumazuva anotevera kana mavhiki ndiyo inoreva kuti iyo mambure chikwereti Telefónica yasvika makumi emamiriyoni mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu emadhora. Izvi zvinoreva muchokwadi kuti yakadzikira ne42.636% zvichienzaniswa negore rimwe chete rapfuura, kunyangwe chinonyanya kufadza ndechekuti yakadzikiswa kwechitanhatu chakateedzana kota. Icho chokwadi chekuti vatengesi vakafarira zvakawanda.
Kubva kwairi kwaigona kuvandudza rally inokwidziridzwa iyo yaizotora mazita ayo kusvika padanho repfungwa, iro rinosimbiswa pamamiriyoni gumi pamugove. Kupfuura izvo zvinogona kugadzirwa inodonha pamutengo wako, yehukuru hwakanyanya kana hudiki. Aya mafambiro anogona kushandiswa kuunganidza zvinzvimbo mukambani yebenchmark equity. Uye chinhu chinonyanya kufadza nezve oparesheni iyi ndechekuti inogona kuitiswa pamutengo wekukwikwidza zvakanyanya kupfuura uya wataurwa parizvino. Nezve iyo mukana wayo wekudzokorora hapana mubvunzo kuti ichave iri yepamusoro, mune ese mazwi: ipfupi, iri pakati nepakati.
Chero zvazvingava, nhau dzichangoburwa dzakasvika kuvarimi mashandiro ehukama enhengo yeinosarudzika indekisi yeSpanish equity, Ibex 35. Mupfungwa yekuti Telefónica yasvika muchibvumirano ne Grupo Catalana Occidente yekutengesa kwe100% yeAntares, kambani yake yeinishuwarenzi kuSpain, nemari inosvika mamirioni 161 emamiriyoni, sezvakataurwa kuNational Securities Market Commission (CNMV).
Iko kutengeserana kunotarisirwa kuburitsa mari inowanikwa yeanosvika mamirioni makumi masere euros yeTelefonica uye kudzikiswa kwemumbure chikwereti chemari padhuze 30 mamiriyoni emamiriyoni. Ichi chiitiko chekambani chakashanduka mukukwira mumutengo wemasheya ayo, kunyangwe hazvo nechisimba chisina kunge chakanyanyisa. Kana zvese zvikaita sekunge zvinoratidza kuti zvinogona kudzikamisa pamusoro pe4% kana kunyangwe ine huwandu hwehasha kubva kune avo vese vagovani vayo vangadai vakabatsirwa.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa panguva ino kuti iyi yakanyorwa kambani iri mune yakaoma mamiriro ayo mune ayo akakosha zvinangwa ndiko kugadzirwa kwekukosha uye nekugadziriswa kwekudzoka pane iyo capital yakashandiswa. Pamusoro pekumwe kufunga kwekuti kusvikira mwedzi mishoma yapfuura yaitaridzika kunge yakaderera pane yekutanga kune yake bhizinesi. Neichi chikonzero, hazvishamise kuti vamwe vanoongorora zvemusika wezvemari vakaratidza kuti zvinogona kupeta kukosha kwayo imwe nguva mumakore mashoma anotevera.
Vakanyudzwa muchiitiko apo purezidhendi weTelefonica, José María Álvarez-Pallete, nhasi akumbira "hwaro hwepasi rose" hunosanganisira kodzero, zvisungo uye hunhu hwedata revagari. Zvichienderana nehurongwa hwekutonga mukati mekambani yakanyorwa inosanganisirwa, nekuti inofanirwa kusarudzwa kuti ndeipi mitemo yepamutemo nehunhu inofanira kusimbiswa muzera rehunyanzvi. Ichi ndicho chinhu icho kambani yekuterevhizheni inotamba zvakanyanya uye iyo inogona kupa isinga nzwisisike nezvekuti iro gwara richaenda kupi mumutengo wenyaya yacho. Pasina mubvunzo, gore rino pachave nemasaini nezve ichi chakakosha chikamu nezve kukosha kwayo mumisika yemari yenyika. Naizvozvo, iwe unenge usina sarudzo asi kunyatsoteerera kune zvine chekuita nenhau idzi kubva zvino zvichienda mberi. Usakanganwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Tichaona Telefónica gore rino pamusoro pe10 euros?
Nzira dzekudyara kuti ubude kunze uri mupenyu mu2019
Decalogue yekuchengetedza mune rako bhizinesi